युगसम्बाद साप्ताहिक - खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ?
Tuesday, 10.15.2019, 08:05pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 08.09.2011, 11:07am (GMT+5.5)
नाबालकहरूलाई काममा नलगाउ भनेर सरकार विज्ञापन गर्छ । डलर खेतीवालाहरू पनि त्यसै भन्छन् । बालश्रम विरुद्ध भाषण गरेर नेताहरू थाक्दैनन् । तर ती भनाइ केवल देखावटी हुन्, गोहीका आँसु हुन् भन्ने कुरा उनीहरूका व्यवहारबाटै बुझ्न सकिन्छ । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने विज्ञापन र तारे होटलहरूमा गोष्ठी भाषण गरेर तयार पारिने र प्रतिवेदनमा गरिने खर्चको दशांश मात्र ती बालबालिकाको जीवनयापन र शिक्षामा लगाइदिने हो भने पनि ठूलो काम हुन्थ्यो । केबल काममा नलगाउ भनेर उपदेश दिएर मात्रै हुन्छ कि काम पनि गर्नुपर्छ ? काम नगरेर के खाएर बाँच्छन् ती ? गरिब, असहाय, द्वन्द्वपीडित, टुहुरा बालबालिकाका नाम बेचेर बाहिरबाट ल्याएका रकमबाट ठूलाबडाले आफ्नै महल ठड्याएका छन् भने तिनैले बालश्रम निषेधको भाषण गर्छन् ।
जसका नाममा ठूलठूलो रकम भित्र्याइएको छ, तिनै अनाथ केटाकेटी कतै होटेलमा जुठा भाँडा माझेर त कतै तिनै भाषण गर्नेका घरमा नोकरका रुपमा बसेर पेट पाल्न बाध्य छन्. । कोही सडकमा अलपत्र छन् भने कतिलाई विदेश पु¥याएर बेचेका पनि छन् । सहाराहीन बालबालिका कसैका लागि कमाउने साधन भएका छन् भने कसैका लागि सित्तैमा नोकर । ज–जसले बालश्रम शोषणविरुद्ध भाषण गर्छन् तिनैका घरमा अधिकांश बेवारिसे दूधमुखे बालबालिकालाई निष्ठुरताका साथ दलेर काम गराइएको हुन्छ । त्यसबाहेक बस, टेम्पोहरूमा झुण्डिएर कामगर्ने एकथरि छन् भने अर्काथरि वर्कशपहरूमा देखिन्छन् । त्यसैले यी भाषण गर्नेहरू इमान्दार छन् भने तिनका नाममा आउने पैसाबाट तिनैको खाने बस्ने र पढ्ने लेख्ने व्यवस्था मिलाएर देखाउन् । व्यवस्था पनि नगरिदिने र काम पनि नगर भन्ने प्रचारवाजी गरेर ती कसरी के खाएर बाँच्छन् ? खोई नेताको इमान्दारी र विवेक ? खोई सरकारमा बस्नेहरू र गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गर्नेहरूको भनाइ र गराइको तालमेल ?
आफ्नो कर्तव्य गर्ने संस्कार यहाँ देख्नै पाइँदैन, सबै अर्कैलाई उपदेश दिने मात्रै भए । आफूलाई कानुन पनि नलागोस्, कानुनको पालना पनि अरुले मात्रै गरुन् भनेर ठूलाबडाहरू असनका साँढे (अब त असन होइन, संसद् भन्नुपर्ला जस्तो छ) जस्ता भएर हिंड्न पाइयोस् भन्नेखालको व्यवहार देखाउँछन् ।
सामान्य मान्छेले त अर्कालाई काम गराउदैन, आफैं गर्छ । नोकर, गोठाला राख्ने त ठूलाबडाले नै हो । त्यसैले बालबालिकाको श्रम शोषण यहाँ हुनेखाने र नेतृत्व तहकाहरूले नै बढी मात्रामा गरिरहेको पाइन्छ । उनीहरू ने फेरि बालश्रम शोषण नगर भनेर उपदेश छाँट्छन् । काठमाडौंका धेरैले गरिबका छोराछोरीलाई पढाइदिन्छौं भनेर ल्याएर सित्तैमा घरधन्दामा दलाएका हुन्छन्, पढाइ भन्ने कुरा चाहिं नमोनारायण । यही हो यहाँका ठूलाबडा जान्नेसुन्ने नेता हुनेहरूको चालचलन । कुरा एउटा, काम अर्को ।
अरु त अरु, माओवादीले नै श्यालले खोरबाट कुखुरा थुतेर लगेझैं घरघर र स्कूल स्कूलबाट केटाकेटी टिपेर लगेका र बन्दुक बोकाएर लडाइँमा होमेका कथा पनि ताजै छन् । आज तिनै माओवादी सरकारमा छन् । विज्ञापन गर्छन् सरकारी पैसा खर्च गरेर उमेर नपुगेका बालबालिकालाई काममा नलगाऔं भनेर । त्यो विज्ञापन गर्ने पैसाले हल्ला नगरिकन बाल कल्याणकारी कार्यक्रम किन संचालन गरिंदैनन् ? आफैंले पालन नगर्ने कुरा अरुलाई उपदेश दिन सुहाउँदो हो त ? आज अबोध बालबालिकालाई समेत पैसा कमाउने र राजनीति गर्ने माध्यम बनाइएको छ । यो लाजमर्दो होइन ?
पञ्चायतकालमा बरु राजपरिवारका सदस्यहरूको प्रयासबाट जनसहयोग जुटाएर पचहत्तरै जिल्लामा बालमन्दिर संचालन र अन्ध अपांग संस्था, कुष्ठरोग निवारण संस्था, तिनका बालबच्चाका लागि शिक्षादीक्षा र आवासीय विद्यालयका साथै सडक बालबालिकालाई समेत पाँचखालमा खाने, बस्ने, पढ्ने र तालीम दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर तिनै संस्थामा समेत राजनीति गर्न थालेर अस्तव्यस्त पारिएको छ । सामाजिक सुधारका लागि लैनचौरमा त्यत्रो बिल्डिङ बनाएर सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत अधिराज्यभरिका सामाजिक संस्थाको सुसंचालनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । तिनै संस्थाको स्थिति भताभुङ्ग छ ।
बिचल्लीमा परेमा असहाय बालबालिकाका नाममा बाहिरबाट आउने सहयोग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले कसरी खर्च गरेका छन् ? केवल गोष्ठी, सेमिनार र विदेश भ्रमणमा खर्च भएको त छैन ? भनेर अनुगमन गरेर त्यस सहयोगको सदुपयोग गराउनु त कताकता, त्यस्ता संस्था कति छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने समेत भरपर्दो अभिलेख सरकारसित छैन । यथार्थमै बालबालिकाका समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारले निश्चित नीति नियम र कार्यक्रमका आधारमा ती संस्थालाई नियमन गरे गराएर साधन स्रोतलाई सदुपयोग गर्ने ठोस र कल्याणकारी योजना व्यवहारमा लागू गरेर अलपत्र परेका अनाथ बालबालिकालाई समेत पैसा कमाउने र राजनीति गर्ने साधन बनाउनबाट रोक्न सक्नुपर्दछ ।
तर यहाँ राजनीति गर्छौं भन्ने र सरकारमा बस्नेहरू भने दाइँमा मियोका वरिपरि गोरु रिंगेझैं कुर्सीकै वरिपरि रिंगिरहेका छन्, देशका जल्दाबल्दा समस्याप्रति कुनै चासो नै भएजस्तो छैन । ओठ निचोरे दूध आउला जस्ता केटाकेटीलाई आफैंले सित्तैमा काममा जोतेर श्रम शोषण गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने काम छोडेर आफूले राम्रो गरेर देखाउनु प¥यो, रित्तो भाषण र विज्ञापन दिएर मात्रै भएन । यथार्थमै बालबच्चाको उद्धार हुने काम गर्नुप¥यो । सम्बन्धित मन्त्रालयले एनजीओ, आईएनजीओहरूलाई स्थिति र अनुशासनमा राख्नुप¥यो । आज उनीहरूले नै राज्य चलाएजस्तो छ । त्यस्तो हुनुभएन । जताबाट आएको पैसा भए पनि त्यसबाट लक्षित वर्ग र समुदायले फाइदा पाउनुप¥यो । हिजोकोभन्दा आजको स्थिति सुध्रेको र सप्रेको जनताले देख्न पाउनुप¥यो ।